XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay amniga Qoor Qoor Maxay tahay sababtu? - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay amniga Qoor Qoor Maxay tahay...
XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay amniga Qoor Qoor Maxay tahay sababtu?
Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM kuna sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug ayaa si rasmi ah ula wareegay amniga madaxweynaha cusub ee Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
Madaxweyne Farmaajo ayaa amar ku bixiyay in si adag loo ilaaliyo amniga madaxweynaha cusub ee Galmudug,maadama khalalaaso siyaasadeed wali ka taagan Galmudug oo ay jiraan Beelo iyo shaqsiyaad wali tabasho qaba.
Saraakiisha ciidanka Itoobiya ayaa xalay Hooyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb kula kulmay Mr. Qoor Qoor una sheegay in hadda wixii ka dambeeyay amnigiisa ay sugi doonaan ciidanka Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidanka Itoobiya ayaa durba la wareegay amniga guud ahaan guriga uu magaalada ka degan yahay madaxweynaha cusub ee Galmudug,waxaana cabsi ka jirta in Ahlu suna magaalada ka sameeyaan falal lidi ku ah amniga.
Previous articleDaawo bananbax lagu tagerayo madayweynaha dowlada ay wadato oo ka dhacay galkacyo cadado iyo….
Next articleAkhriso Qoor Qoor oo Qorshe cusub u dejiyay soo xera gelinta Xaaf & Ahlu suna